‘Tsy Matoky Intsony Ny Governemanta Ny Vahoaka’ : Niely Be Tany Singapore ity Taratasy Misokatra ity · Global Voices teny Malagasy
‘Tsy Matoky Intsony Ny Governemanta Ny Vahoaka’ : Niely Be Tany Singapore ity Taratasy Misokatra ity
Voadika ny 04 Jolay 2014 8:50 GMT
Avy amin'ny vohikalan'i Catherine Lim
Nanoratra taratasy misokatra i Catherine Lim, mpanoratra tantara fanta-bahoaka sady mpanoratra avy any Azia Atsimo Atsinanana monina any Singapour, ho an'i Lee Hsien Loong, Praiministra, hilazàny ny alahelony momba ny fihemoran'ny fitokisan'ny vahoaka ny governemantany.
Nanjary nalaza be tamin'ny aterineto sy notaterin'ireo haino aman-jery mahazatra ny olona ilay taratasy. Nahatonga adihevitra mafana sady mahaliana momba ny politika any Singapore izany ary indrindra fa ilay fanenjehana noho ny fanalam-baraka nalefan'ny Piraiminisitra tany am-piandohan'ity volana ity ho anà mpitoraka bilaogy iray. Taratry ny fahamarinan'ny olana marobe avoitran'i Lim ny fiparitahan'ilay taratasy haingana be. Manamafy ny mbola fandraisan'anjara mavitrik'ireo mpisera amin'ny aterineto any Singapore momba ny olana sosialy sy politika izany.
Voalohany, nomarihin'i Lim fa miha-sahy ny olona manao ilay soratra amin'ny rindrina izay mahatonga sazy henjana isan'izany ny fampidirana am-ponja sy ny fikapohana amin'ny karavasy maka endrika asa fandrobàna ny firenena nosy izany :
Tena ao anatin'ny krizy izay tsy itokisan'ny vahoaka intsony ny governemantany sy ny tsy firaharahian'ny governemanta ny hàka indray ny fitokisam-bahoaka intsony isika izao.
Voalohany indrindra, miantso fanaraha-maso avo lenta ny vahoaka, hetsi-bahoaka tena sahisahy izay tsy mbola fahita hatramin'izay, toy ny lalàna naofhezina ho fohy nosoratana ngezabe aminà tranom-panjakàna, ny fitohizan'ny tsikera tena henjana amin'ny aterineto na dia eo aza ny fampitandremana sy ny fandrahonana mafy nataon'ny governemanta, ny fahatetehan'ny famoriam-bahoaka atao any amin'ny Speakers’ Corner ( Zoron'ny mpiteny), tahaka izany ihany koa ny fitombon'ny fankahalana aseho any amin'ireny fivoriana ireny.
Tsinian'i Catherine ny Piraiminisitra noho ny tsy fihainoany ny vahoaka :
…ny fehiny dia ny tsy fahaizanao na fandavanao tsy hihaino ny vahoaka. Taorian'ny fifonanareo sy ny fampanantenanareo mivaivay fa hiova rehefa tsy nahavoa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 2011 ( fiovam-po izay nanaitra sy naharisika ny ankamaroan'ny vahoakan'i Singapore toa ahy ihany koa) dia tahàka ny manamafy ny toerany sy miverina miankina indray amin'ny PAP mamboly tahotra amin'ny fanaparitahana ireo fitaovaana fanaraha-maso malazan'ny PAP, indrindra fa ny fanenjehana noho ny fanalam-baraka.
Antoko eo amin'ny fitondrana hatramin'ny 1959 ny PAP na Antokon'ny Hetsi-Bahoaka. Mbola izy no antoko natanjaka tamin'ny fifidianana tamin'ny 2011 saingy vitsy ny isam-bato azony. Tato anatin'ny taona vitsivitsy , Singaporeana maro no nanakiana ny governemanta noho ny tsy fahombiazany manoloana ny fiakatry ny vidim-piainana, ny fitombon'ny tsy fitovian'ny karama ary ny fahamaroan'ireo vahiny mpifindra monina miasa ao amin'ny tanàna.
Nisy ny fitoriana an’ ilay mpitoraka bilaogy izay niampanga tsy nisy porofo ny Piraiminisitra ho voarohirohy aminà kolikoly. Efa niala tsiny ilay mpitoraka bilaogy saingy tsy mbola nosintonina ny raharaha.
Avy eo nampahatsiahivin'i Catherine ny PM Lee fa liana ihany koa ny hahazo zo misimisy kokoa ny tanora :
ny fanantenàn'ny olona, indrindra ny tanora dia mihoatra lavitra ny filàna ara-materialy, entina hilazàna ny filàna fahalalahana maneho hevitra efa nolavina efa hatry ny ela, ny adihevitra misokatra ary ny fivoriam-bahoaka.
Mety tsy mandaitra intsony amin'izao fotoana izao, na niha-ratsy, na mety efa rava aza angamba ny zavatra nandeha tsara tamin'ny vanim-potoana taloha.
Nampitandrina ny mpitondra Singaporeana izy fa raha toa ka tsy jerena ny olan'ny tsy fitokisana, dia mety hitarika ho korontana ara-politika izany :
Fotoana iray eo amin'ny tantaran'i Singapore izao, misy tantara iray vaovao hiseho rehefa voafafan'ny lasa ny teo aloha. Raha toa ka tsy voavaha io olan'ny tsy fitokisana amin'izao fotoana izao io, dia ho sarotsarotra kokoa no miandry izay Piraiminisitra sy ireo andian-taranaka vaovao ho mpitarika manaraka eo, noho izany manomboka eo dia mety hivadika korontana ilay olana.
Nalaza vetivety ny taratasin'i Catherine. Avy amin'Atoa Jacky Foo, Kaonsily Jeneralin'i Singapore any Hong Kong izay tsy nanaiky ny fomba fijerin'i Lim momba ny fihemoran'ny fitokisan'ny vahoaka ny valinteny ôfisialy :
Marina fa tsy lafatra avokoa ny zavatra rehetra any Singapore. Tahaka ireo fiarahamonina hafa mandroso, dia mahatsiaro ho voaterin'ny fanatontoloana ihany koa ny saranga antonony eto amintsika. Niaiky ampahibemaso ny olan'ny tsy fitovian'ny karama sy ny fihisatry ny fivezivezena ara-tsosialy ny governemanta. Efa nanao ezaka maro ry zareo mba hihoarana azy ireny, ary amin'ny fomba maharitra sy tompon'andraikitra, fa tsy amin'ny fidehadehafana hakàna fon'olona. Izany no mbola maha-ambony ihany ny fitokisana ny governemantan'i Singapore.
Narovany ihany koa ilay fanenjehana noho ny fanalam-baraka nataon'ny PM ilay mpitoraka bilaogy :
Diso ihany koa Rtoa Lim amin'ny filazàna fa mandrava tsikelikely ny fifampitokisana ilay fanenjehana ilay mpitoraka bilaogy nataon'ny Piraiminisitra Lee Hsien Loong noho ny fanalam-baraka, ny mifanohitra amin'izany aza no misy, nataon'Atoa Lee izany fihetsika izany satria omen'ny governemanta lanja ho toy ny loharanon'ny fitokisana izay isalorany ny fahamarinana. Ny mpitarika izay tsy mihetsika rehefa ampangaina ho nanao fanodikodinam-bola goavana tao amin'ny volam-panjakana no tsy maintsy mahatonga ny fisalasalàna ny amin'ny fahamarinany sy ny fahaizany mitarika.
Novalian'i Lim i Foo ary nohamafisiny fa ‘tena zava-misy marina ny tsy fitokisana’ :
Tiako ho tsindriana fa tena zava-misy marina ny tsy fitokisana, na dia olom-bitsy ihany aza no voakasik'izany.
Tsikerain'Atoa Foo ho toy ny fitarainana ny tantara lava nosoratako. Efa ho 20 taona izao no nanoratako tsikera ara-politika. Ny filàna fifampitokisana matanjaka amin'ny mpitondra sy ny vahoaka no fototra ijoroany, izay inoako marimarina fa hany antoka hahafahan'ny firenena bitika iray hivelona eo anivonà tontolo iray izay miha-ratsy hatrany hatrany.
Ho valin'ny taratasin'i Catherine dia neken’ ilay tonian-dahatsoratra fahiny tao amin'ny Straits Times, Bertha Henson, ny teboka momba ny fomba niovan'ny politika any Singapore ho ‘fandraharahàna’ tsotra eo amin'ny mpitarika sy ny mponina :
Manjary fandraharahàna ny fifandraisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina. Ny mpitarika no mpanao fifanarahana izay karamaintsika hanao asa tsara. Rehefa misy asa tsara vita dia heverintsika fa izay no tokony ataon-dry zareo satria isikano mandoa ny volan'izy ireo. Fa rehefa misy ny tsy mety dia tsy milefitra isika satria heverintsika fa tsy mendrika ny vola aloa aminy ry zareo. Satria koa MANDOA KARAMA ho azy isika, dia misy ny fifanajana kely.
Antony iray fantatro fa andraisana karama ambony dia ny fanaovana politika ‘madio’. Nefa heveriko fa lasa ambony noho ny fitokisana sy ny fanajan'ny vahoaka ireo mpitarika politika ilay izy. Iza no zava-dehibe kokoa amin'izao fotoana izao ?
Mahavariana, navoakan’ny PM Lee tao amin'ny Facebook-ny ny taratasy misokatra iray izay nosoratanà mpiasa iray tsy mitonona anarana rehefa niely be ilay an'i Lim. Nidera ny governemanta sy nanome toky ny PM Lee ilay mpandefa taratasy fa mbola manohy manohana ny fahaizany mitarika ny ankamaroan'ny Singaporeana :
Faly aho, Singaporeana aho. Velom-pisaorana aho fa mandinika tsara sy mitsinjo lavitra ny governemantako. Antenaiko fa mitondra fampaherezana kely ho anareo ny hoe tsy ny Singaporeana rehetra no hisaina toa an'i Roy Ngerng ary ireo mpikatroka mafàna fo hafa izay tsy mety milefitra amin'ny fombany mihantsy ‘ny governemanta.